मौद्रिक प्रणाली र यसको तत्व।
मिति, संसारमा कानुनी राज्य को कुनै पनि मौद्रिक प्रणाली बिना अवस्थित गर्न सक्दैन। मौद्रिक प्रणाली र यसको तत्व राष्ट्रिय सरकार कानून को पछि अनुमोदन संग इतिहास पाँच शताब्दीपछि समयमा गठन भएको थियो जो देशको घरेलू अर्थव्यवस्था, को मौद्रिक परिसंचरण को एकाइ हो। विभिन्न देशहरूमा मौद्रिक प्रणाली बीच मुख्य फरक एक विश्वव्यापी मुद्रा छ।
वर्तमान मा, मौद्रिक प्रणाली र यसको तत्व वाहक जो धातु मुद्रा प्रणाली हो संरचित प्रकार, वास्तविक पैसा (चाँदी, सुन, प्लेटिनम सिक्का, आदि) को आधारमा र क्रेडिट र कागज परिसंचरण को सिस्टम (मौद्रिक घटक supplanted साइन मूल्य देखि गठन गर्दै )। बारी मा, प्रणाली वैश्विक अर्थव्यवस्था को धातु को प्रकार bimetallism र monometallism मा पर्छ।
चाँदी र सुन - Bimetallism दुई मौद्रिक बराबर स्तर को प्रयोग द्वारा विशेषता। त्यहाँ धातु को दुई प्रकार प्रयोग सिक्का मुक्त coinage अनगिन्ती हुँदा मौद्रिक प्रणाली यस प्रकारको, xvi-XVIII शताब्दीयौंदेखि संचालित। दुई धातु को प्रयोग सामान र सेवाहरू लागि मूल्य नीतिमा उतार चढाव गराउँछ किनभने पैसा सिस्टम को यस प्रकारको, बजार मा आर्थिक अवस्थामा उतार चढाव गर्न नेतृत्व गरेको छ। तसर्थ, monometallism गर्न एक संक्रमण गर्न प्रमुख, एक स्थिर मुद्रा परिसंचरण आवश्यक जो पूंजीवाद को विकास, मा। Monometallism मात्र प्रयोग गरेर विशेषता धातु (चाँदी एक सामान्य बराबर रूपमा, वा सुन)। मौद्रिक प्रणाली सुन monometallism यस प्रकारको विकास संग पर्याप्त परिवर्तन, सुन सिक्का, बुलियन र सुन विनिमय मानक विभाजित प्राप्त। सुन सिक्का मानक देश मा खुलेर प्रयोग भएको थियो, तर बाह्य व्यावसायिक सन्देशहरू लागि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। लामो पहिलो विश्व युद्ध को अन्त मा, यो मानक कारण सैन्य खर्च गर्न धारिलो धातु घाटा कारण रद्द गरिएको छ। यसको सुन बुलियन र बदलिएको सुन विनिमय स्तर। लागि टैग: विनिमय बैंकनोट्स यी प्रकार सुन बुलियन वा slogans (नगद विदेशी मुद्रा भुक्तानी), सुन साटासाट गर्न सकिएन जो। तर, यी स्तर एकल को परिचय गर्न नेतृत्व जो वैश्विक आर्थिक संकट, पछि रद्द गरिएको छ को कागज-क्रेडिट सिस्टम उपचार। यो प्रणाली देशमा साधारण नोट को मुद्दा मा आधारित छ। जर्मनी मा मौद्रिक प्रणाली पैसा परिसंचरण को ऐतिहासिक विकास एक प्रमुख उदाहरण हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली र यसको तत्व मौद्रिक र वित्तीय सम्मेलन को एक सभामा 1944 मा गठन भएको थियो संयुक्त राष्ट्र संगठन को कहाँ यसलाई परस्पर-राज्य सुन विनिमय मानक परिचय निर्णय थियो Bretton वुड्स, मा संयुक्त राज्य अमेरिका मा। यसलाई सहमत र केही नियमहरू तय भएको थियो:
सुन समारोह प्रदर्शन, दुई देशहरू बीच गणना को परम हालतमा रूपमा मान्यता थियो दुनिया पैसा, र पनि सामाजिक धन मूल्यांकन एक मानक रूपमा सेवा गरे।
डलर र पाउन्ड स्टर्लिङ - अमेरिकी मुद्रा र ब्रिटिश एकाइ को विश्व अर्थव्यवस्था सुनको प्रयोग संग भएको थियो।
संयुक्त राज्य अमेरिका को आधिकारिक मूल्य आधारमा सुनको बजार मूल्य स्थापना गठन भएको थियो।
राष्ट्रिय मुद्राहरू खुलेर सुनको देशको केन्द्रीय बैंक डलर लागि साटासाट गर्न सकिन्छ, र त्यसपछि। यो विनिमय दुई देशहरू बीच बहुपक्षीय बस्तियों को संभावना को योगदान गरे।
कारण देशमा सुन रिजर्व को रिक्तीकरण गर्न अमेरिकी बजार को बाह्य स्थिति को कमजोर को परिणाम स्वरूप, डलर को बेन्चमार्क आधारित थियो जो अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक प्रणाली र यसको घटक, दिवाला भोगे। डलर ठाउँमा आरक्षित मुद्रा आए - जर्मन मार्क, को एसडीआर, ECU र जापानी येन, र सुनको डलर मूल्य आधिकारिक रद्द गरिएको छ।
क्रेडिट कार्ड को विवरण बाहिर कसरी फेला पार्न र यसलाई रकम को स्थानान्तरण गर्न?
को LLC लागि एक बैंक खाता खोलेर। कसरी LLC लागि जाँच खाता खोल्न
वित्तीय प्रश्न छ: कसरी लाभदायक व्यक्तिहरूलाई लागि लगानी, Sberbank प्रस्ताव तयार छ?
क्रेडिट कार्ड: बैंकिंग कार्ड, डिजाइन, समारोह, सुविधा र कार्यक्षमता
किन अपरिवर्तनीय बैंक ग्यारेन्टी
जो बैंक लगानी गर्न? वा बैंकमा मात्र ...
उपनगरीय क्षेत्रमा ग्लास ग्रीनहाउस
सुँगुर को प्रसिद्ध खाडी र किन यो यति भनिन्छ?
डिजिटल कम्पास - हकदार चुम्बकीय कम्पास
रूसी कमेडी "रियल पिताजी": अभिनेता र भूमिकाको
पनाकोटा के हो? क्लासिक पनकोटा को लागि नुस्खा
मास्को को सबै भन्दा राम्रो कन्सर्ट हल
बच्चा मा Pinworms: उपचार को विधि र रोगहरु को रोकथाम
प्रोटिन Dukan आहार मेनु। प्रोटिनको आहार लागि व्यञ्जनहरु
मरियम-Keyt Olsen: जीवनी, Filmography र व्यक्तिगत जीवन
रूस र संसारमा पर्यटन घटना। सुविधाहरू घटना पर्यटन, यसको प्रकार
एक व्यक्ति हुन - यसको के मतलब छ?
आफ्नो हातले मिठाई को भुईँकटर। चरण फोटो द्वारा चरण संग मास्टर वर्ग